Jufo ka mid ah Beesha Murusade oo caleemo saartey Nabadoon guud. (Daawo Sawirada) | Baydhabo Online
Jufo ka mid ah Beesha Murusade oo caleemo saartey Nabadoon guud. (Daawo Sawirada)
Waxaa Shalay Munaasabad balaaran oo ka dhacday Hotelka Dayah ee magaalada Muqdisho lagu caleemo saaray Nabadoonka Guud ee Jufada Afey Maqaafaad (Daguuro Maxamed )oo ku abtirsata Beesha Murusade.
Munaasabada waxaa kasoo qeyb galay Waxgarad, Aqoonyahano, Culumaa’udiin iyo dhalinyarada Beesha Daguuro Maxamed, waxaana dhamaan dadkii Munaasabada kasoo qeyb galay ay u hambalyeeyeen Nabadoon C/Raxmaan Aadan Barrow.
Waxa ay Tilmaameen Odayaashii kala duwanaa ee Munaasabada ka hadlay in ay ku faraxsan yihiin ayna soo dhaweenayaan Caleemo saarka Nabadoon C/Raxmaan Aadan Barrow oo loo caleemo saaray Nabdoonka Guud ee Beesha Afeey Maqaafaad.
Gabo gabadii Munaasabada waxaa ka hadlay Nabadoon C/Raxmaan Aadan Barrow, waxa uuna u mahad celiyay dhamaan dadkii kasoo qeyb galay Munaasabada, waxa uuna balan qaaday in uu si cadaalad ah uu ugu shaqeenayo dadka isaga doortay uuna ka shaqeyn doono Midnimada Beesha iyo mida Soomaaliweyn.
Munaasabada ayaana kusoo dhamaatay jawi aad u wanagasan, waxaana dhamaan dadkii kasoo qeyb galay Munaasabada ugu duceeyeen Nabadoonka Maanta la caleemo saaray in ilaahey la garab galo xilka culus ee maanta dusha laga saaray.